6 Amathiphu Okubalulekile we-SEO Wonke ama-Smart Entrepreneur Kufanele Awamkele
Ivan Konovalov, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende iSemalt i-Digital Agency inikezela isipiliyoni sendlela yokusungula ukusebenza kahleI-SEO practice enkampanini yakho.
Ezinye zezinkampanini ze-Fortune 500 ezinhle kakhulu futhi eziphumelele kakhulu ezweni lanamuhla zinento eyodwa efana kakhulu: iningi laboabe ne-website ephezulu, okusho ukuthi iwebhusayithi esemthethweni ivela emiphumeleni embalwa yokuqala eyenziwe yizinjini zokuseshakusuka kusesho lwewebhu, ikakhulukazi uma indawo ifakiwe emishweni yokusesha. Noma kunjalo, lawa mawebhusayithi awazange afinyelele laphongomlingo. Okunye ubuchwepheshe obuphezulu obuphezulu busetshenzisiwe, izinqubo ezilandelwayo, nokuhlaziywa kwenziwa. Yilokho incazelo echazwe ngokufingqiwengalokho esikwenzayo ku-Semalt.
Ngencazelo yayo, ukusebenza kwe-injini yokusesha, okubizwa nangokuthi ukukhangiswa kokusesha noma i-SEO, yinquboukwandisa noma ukuthuthukisa ukubonakala kwewebhusayithi inthanethi - arkema spring plus b135. Kuhilela ucwaningo lwegama elingukhiye, ukuthuthukisa okuqukethwe ngamagama angukhiye afanelekile,kanye nokusetshenziswa kwayo okuyisisekelo kwiwebhusayithi ukuze kukhishwe ukuxhumana okubanzi, i-ROI, nokuthembeka kusuka emakethe yakho okuhlosiwe noma okuhlosiweizilaleli. Izingosi zomphakathi nazo zibaluleke kakhulu uma kuziwa ku-SEO. Lokhu kunjalo, ngezansi kukhona amathiphu ambalwa okubalulekile we-SEOKunconywa ngu-Ivan Konovalov kufanele wazi njengomuntu osomabhizinisi ohlakaniphile.
1. Khetha Amagama Angukhiye Wakho Ngakwesokudla
Noma ubani onenani okungenani ulwazi mayelana nokuthi yi-SEO, ngokuvamile, kusobala ukuthi amagama angukhiye abaluleke kakhulu. Kunjaloabafaki badutshulwa emikhankaso ye-SEO, ikakhulukazi uma kuhlanganiswe kahle okuqukethwe. Empeleni, izinjini zenzaimiphumela yokusesha esekelwe ukuhlanganiswa kwamagama afakwe umsebenzisi we-intanethi lapho ebuka ulwazi phezu kwewebhu. Ukutholaamagama akho angukhiye ilungelo afaka phakathi kufaka phakathi amagama angukhiye ahlobene noma ama-synonyms awo, okumele imakethe yakho ehlose ingene kuyo uma useshafor service noma umkhiqizo ohlinzekwa ibhizinisi lakho..Okunye ukudala kungadingeka lapha, noma ngabe i-agency ye-SEO echwepkungasiza ekwakheni isu elingukhiye elizokhipha umncintiswano wakho emakethe.
2. Sebenzisa ukuheha izithombe namavidiyo ku-SEO
Ucwaningo lubonisa ukuthi amavidiyo nezithombe zingenye yamathuluzi angcono ekukhangiseni. Lokhu kungenxa yokuthi baxhumana kakhulu futhiokukhangayo uma kuqhathaniswa nombhalo ocacile. Uma isetshenziswe kokuqukethwe, amavidiyo nezithombe zithatha ukunakekelwa okuphumelelayo. Futhishiya inkumbulo ehlala njalo engqondweni yezimakethe zakho ezihlosiwe. Noma kunjalo, lezi zingane kufanele zihambisane ne-injini yokuseshaokulungiselelwe kanye negama eliyisisekelo eliqukethwe ngokuqukethwe kombhalo, tshela izincazelo nolwazi oluhlobene nomyalezo oyinhloko ohanjiswayoemkhankasweni othize we-SEO. Inombolo eningi yabathengi be-intanethi nabasebenzisi be-intanethi bathonywa ukuthatha isenzo ngokukhangayonamavidiyo anamandla / izithombe, ngakho-ke qiniseka ukuthi usebenzisa okungcono kakhulu ongayithola.
3. Lungiselela Iwebhusayithi Yakho Yezinjini Eziningi Zokusesha
Njengomabhizinisi osomabhizinisi, ngeke kube yiphutha ukucabanga ukuthi usuvele wazi ukuthi yizwe leselula esiphila kulo. Abasebenzisi abaningi be-intanethilalo suku nosuku bachitha isikhathi esiningi kumadivayisi wabo weselula, okufaka ama-smartphones namaphilisi, uma kuqhathaniswa nedeskithophuamakhomphyutha nama-PC ephathekayo. Ukuze ungaphumeleli engxenyeni enkulu yekhekhe emncintiswaneni wakho, qiniseka ukuthi ukwandisaiwebhusayithi yakho yokuvumelanisa mobile.
Ngamanye amazwi, iwebhusayithi yakho kufanele ifinyeleleke kusuka kudivayisi ephathekayo ngaphandle kwezinkinga noma izinkinga. Ngale ndlela, yakhoizethameli noma imakethe ehlosiwe iyakwazi ukuthola ulwazi olubucayi noma ukuthenga imikhiqizo / amasevisi wakho ekuhambeni. Omunye akudingekibalinde baze basehhovisi ukuze bakwazi ukuhlela i-pizza, becabanga ukuthi yileli bhizinisi lakho. Okungaphezulu kwalokhu okungaphezuluwe-design design yewebhu, ene-SEO-friendly, version mobile yewebhusayithi yakho izokuvuza ngokuhle.
4. Iya Kweselula
Ngokungangabazeki ukuthi i-Google iyinkosi yezinjini zokusesha, inani eliningi labantu likhetha nezinye izinketho ezifana ne-Bing ne-Yahoo,ukukhuluma nje ezimbalwa. Awufuni ukubeka wonke amaqanda akho ebhasikisini elilodwa. Ukuze uthole izinzuzo ezingcono kwi-SEO utshalomali, qiniseka ukuthi uthumeleindawo yakho eya kwabanye abadlali embonini ye-injini yokusesha futhi, kokubili izikhangiso ezikhokhwayo nezikhokhelwe..Kulokhu, kungaba ukuhlakaniphafunda into noma amabili mayelana nokuthi ama-search ehlukene afakwa kanjani amawebhusayithi.
5. Gcina iso lakho ku-SEO wendawo
Njengoba uthando luqala ekhaya, ibhizinisi ngeke likwazi ukuyenza emakethe ye-intanethi ngaphandle kweqhinga lokuwina le-SEO yangakini, ikakhulukaziuma kuqala. Njengoba usomabhizinisi ohlakaniphile, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi imakethe yangakini inganquma ukuthi ingabe inzuzo yakho izobanoma ngeke uphumelele ku-intanethi ngaphesheya kwemingcele. Ngokuyinhloko ngokukhiqiza umgwaqo omningi kakhulu ngangokunokwenzeka kuwebhusayithi yakhokusuka usesho lwendawo, olubucayi kakhulu uma kuziwa ekusetshenzisweni kwenjini yokusesha.
Ukuze uthole okuningi emizamweni yakho yokwenza injini yokusesha, yisikhathi esiphezulu ocubungula ukusebenzisa izinkampani zendawo zendawo. Isiphathimandlaizindawo zokuqondisa ezifana namakhasi aphuzi, i-Yelp, namanye amawebhusayithi wokuqondisa angaphinde afaneleke. Kubalulekile ukuqiniseka njalo lokhoUlwazi lwakho lwebhizinisi ohlwini lwasendaweni luhlala lungaguquguquki futhi lunembile, ikakhulukazi ukulandelela indlela oxhumana nabo bebhizinisi lakho futhiImininingwane yekheli ihlelwe kuwo wonke amapulatifomu e-intanethi ahlukahlukene.
6. Ungalindi kuze kube yilapho okuqukethwe kweSayithi yakho kungasebenzi
Yebo, kungenzeka ukuthi ulayishe ezinye izihloko ezifingqiwe nokuqukethwe kwekhasi lewebhu kusayithi lakho esikhathini esidlule; kodwa lokho akusho ukuthi izibuyekezongeke kudingeke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Noma yimuphi umuntu onemfundo eyisisekelo uzovuma ukuthi olunye ulwazi alutholakalingesikhatsi. Ikakhulukazi uma kuziwa kubabukeli be-intanethi nabathengisi bewebhu, awufuni ukuwashiya engabonakali. Ukulayisha ulwazi olusha,okuqukethwe, nedatha ebalulekile manje manje futhi kuzogcina ibhizinisi lakho kusengaphambili kumdlalo, ikakhulukazi uma kuziwa emotweni yewebhu kanye nenjini yokuseshaizikhundla. Vele uqiniseke ukuthi uhlinzeka ngokuqukethwe okunenjongo nokuthakazelisayo emakethe yakho ehlosiwe noma izethameli zizothola ziwusizo futhi zibandakanye.Ngithembele, okuqukethwe kunenkosi, futhi ngeke uzisole ngemizamo yakho ye-SEO.
Ngisho noma kungaqondakali kahle ngabaningi, i-SEO iyisithako esiyinhloko sokuphumelela kunoma yiliphi ibhizinisi elinemisebenzi ye-intanethi. Ngokusesha okucacile nokuhlelekileisu lokuthuthukisa injini, ifika emotweni eyengeziwe, i-Google rankings ephezulu, ukuthengisa okuningi, nokukhula okwengeziwe kwebhizinisi lakho, ikakhulukazi kusuka ku-inthanethiukusebenza. I-SEO ingathola ubuchwepheshe obukhulu nokudla isikhathi esithile, ngakho-ke ungase ufune ukutshala imali ku-agency ye-SEO ukuze uthole okuningiyebhizinisi lakho ku-intanethi.